Raad Raac News Online – Ciidmadda badda Puntland oo iska hor’imaad kala kulmay Burcad heysata Markab Aris 13.
Ciidmadda badda Puntland oo iska hor’imaad kala kulmay Burcad heysata Markab Aris 13.
Moos Bukeeni March 16, 2017 Comments Off on Ciidmadda badda Puntland oo iska hor’imaad kala kulmay Burcad heysata Markab Aris 13.
Wararka ka imaanaya Degmada Caluula ee Gobalka Bari ayaa sheegaya in maanta uu halkaasi ka dhacay iska hor’imaad dhexmaray ciidamada Badda Puntland iyo Koox hubeysan oo gacanta ku heysa Markab Weyn oo nooca shidaalka qaada ah.
Iska hor imaadka oo la sheegaya in waxyeelo ay ka soo gaartay CIidamadda Badda ee Puntland ayaa ka dambeeyay ka dib markii ay iska xoogan kala kulmeen kooxdaasi hubeysan oo diidan in markabka ay ciidanka furtaan.
Sidoo kale wararka ayaa sheegay in iska horimaadkan uu ka dambeeyay ka dib markii Ciidamadda badda ee Puntland ay weerar ku qaadeen Saxiimad Cuno u siday kooxda hubeysan goobtana u dagaalka ka dhashay.
Dhaawacyada oo ay ku jiraan Ciidamada Badda iyo Dad degaanka ah ayaa lagu soo waramayaa in lagu daweynayo gudaha degaankasi halkaasi oo xaalad kacsanaan ah ay ka jirto.
Dadka degaanka Degmada Caluula ayaa bilaabay in ay degaanka isaga barakacaan kuwaasi oo cabsi iyo wal wal xoogan ka muujiyay in ay waxyeelo ka soo gaadho Dagaal laga cabsi qabo in halkaasi uu ku dhexmaro ciidamada Puntland iyo Kooxda hubeysan.
Arinta Weerarkan qasaaraha ka dhashay ayaa ka dambeeyay ka dib markii shalay uu fashil ku dhamaaday shir looga arinsanayay sidii loo sii deyn lahaa markabkaasi.